Progressive Voice Myanmar » Peoples Voices
Home People's Voices
This channel is to ensure historic voices and actions are not being left unheard or unknown. The Civil Disobedience Movement, youth movement, general strikes and all other respective inspirational movements are crucial struggles that must be heard, seen, understood, recognized, and supported widely at local, national, and international levels. Therefore, this page aims to project these inspirational and unforgettable movements and voices from states and regions at all levels, parts and corners of society from the people in Myanmar regardless of ethnicity, religious background, sexual orientation, and gender identity. It also highlights the remarkable collective struggles of the people and inspiring stories of heroes and heroines throughout the Spring Revolution.
The Myanmar military and Police Force have been committing grave human rights violations against the people of Myanmar since the coup on 1st February 2021, amounting to crimes against humanity. The impunity of the Myanmar military must end, and the brutal junta must be held accountable for its crimes. Here are just some of the crimes being committed with total impunity in Myanmar as the people continue to stand in defiance of the illegitimate brutal military: targeting of civilians using lethal force; shoot-on-sight policies with live ammunition; extrajudicial killings; arbitrary arrest; detention and torture; forced labour; sexual violence; theft and looting; destruction of property; internet restrictions; muzzling of the press; violence against children; forced displacement; and concealment and the destruction of evidence of their crimes, among others.
This channel makes the information available in English to help the international audience understand the big picture of the context and current movement in Myanmar.
The current prioritized issues below are accessible in this channel:
Creative forms of people’s movement/protests in response to military/police atrocities.
Remarkable stories and messages of heroes and heroines including retaliation on remaining family members of said heroes and heroines.
Last written and spoken words from fallen heroes and heroines.
Fellow demonstrators’ promises to fallen heroes.
Important messages from local movement leaders and their profiles.
Remarkable stories and voices of Civil Disobedience Movement.
Religious leaders’ participation and messages.
ယခု အင်တာနက်စာမျက်နှာသည် လူထု၏ သမိုင်းဝင်အသံများနှင့် လုပ်ရှားမှုများကို မသိ၊ မကြားလိုက်ရသည့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စစ်အာဏာရှင်အား အာဏာဖီဆန်သည့် လှုပ်ရှားမှု (CDM)၊ လူငယ်လှုပ်ရှားမှု၊ အထွေထွေသပိတ်များနှင့် အခြားသော စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမည့် လှုပ်ရှားမှုများ အားလုံးသည် အရေးပါသော ရုန်းကုန်လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်သည့်အလျောက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က သိရှိ၊ နားလည်၊ အသိအမှတ်ပြုခံရရန်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အားပေးထောက်ခံများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ယခု စာမျက်နှာကို ဒေသအစုံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လိင်စိတ်ခံယူချက် မတူကြေသာ နယ်ပယ်အလုံးစုံမှ လူထုများ၏ မမေ့နိုင်လောက်ဖွယ် လှုပ်ရှားမှုများ မှတ်သားဖွယ် အသံများကို ထုတ်ဖော်ပေးရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ၎င်းအပြင် လူထု၏ ထူးခြားမှတ်သားဖွယ် တော်လှန်လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုများ အပါအဝင် နွေဦးတော်လှန်ရေး တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသော အမျိုးသမီး အမျိုးသား သူရဲကောင်းများ၏ အကြောင်းအရာများကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြသွားရန်လည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းချိန်မှစ၍ မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်သောရာဇ၀တ်မှုဖြစ်သည်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်၏ အပြစ်ပေးအရေးယူမှု ကင်းလွတ်ခွင့်ကို အဆုံးသတ်ရပါမည်။ စစ်အစိုးရကိုလည်း ၎င်း၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အပြစ်ဒဏ်ခံစားစေရမည်။ တရားမ၀င် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော စစ်တပ်ကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင် တော်လှန်နေကြသော ပြည်သူလူထုအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ခံယူခြင်းကင်းမဲ့စွာ ကျူးလွန်နေသော ပြစ်မှုများမှာ အကြမ်းဖက် စစ်အင်အားစုများအသုံးပြု၍ ပြည်သူများကို ပစ်မှတ်ထားဖြိုခွင်းလာခြင်း၊ ကျည်အစစ်များကို အသုံးပြု၍ ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ပြည်သူပိုင် အိုးအိမ်ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခြင်း နှင့် ခိုးယူလုယက်ခြင်း၊ အင်တာနက် ပိတ်ပင်ခြင်း၊ သတင်းဌာနများကို ဖိနိပ်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များကို အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ နေရာရွှေ့ပြောင်းစေခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပြစ်မှု အထောက်အထား သက်သေများကို ဖုံးကွယ် ဖျက်ဆီးခြင်း စသဖြင့် များစွာပါဝင်သည်။
ဤလမ်းကြောင်းမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နိုင်ငံတကာပရိသတ်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့် လက်ရှိလှုပ်ရှားမှု၏ ကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကို နားလည်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါမည်။
ဤချန်နယ်တွင် ဖြည့်စွက်ပေးသွားမည့် လက်ရှိ ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
စစ်တပ် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများအား တုံ့ပြန်သည့် လူထု၏ တမူထူးခြားသည့် လှုပ်ရှားမှု နှင့် ဆန္ဒပြမှုများ
သူရဲကောင်းများ၏ ထူးခြားမှတ်သားဖွယ် ဖြစ်ရပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကျန်ရှိနေသေးသော မိသားစုဝင်များအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာများ
ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသော သူရဲကောင်းများ၏ နောက်ဆုံးရေးသား ပြောဆိုခဲ့သော စကားသံများ။
ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသော သူရဲကောင်းများအတွက် ကျန်နေခဲ့သော ဆန္ဒပြပြည်သူများထံမှ ပေးခဲ့သော ကတိစကားများ
ဒေသအလိုက် လှုပ်ရှားမှုများကို ခေါင်းဆောင်သူများထံမှ အရေးကြီးသော သတင်းစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ
အာဏာဖီဆန်သည့် လှုပ်ရှားမှု (CDM) တွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများ၏ မှတ်သားစရာ အကြာင်းအရာများနှင့် ၎င်းတို့၏ အသံများ
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှု နှင့် သတင်းစကားများ
Author All Bleeding Dye Strike Civil Disobedience Movement Drowning Strike Easter Egg Strike Flower Strike
Myanmar: State of Fear – 101 East exposesasecret interrogation centre and claims of torture
June 16, 2021 • Author: Spring Revolution (Myanmar)
May 2, 2021 • Author: Spring Revolution (Myanmar)